साउदी अरब को राज्य - विश्व मा सबै भन्दा रूढिवादी देशहरूको एक। यहाँ हामी महिला मुख्य रूप घर पर्खाल को सख्त अलगाव पालन। साउदी अरबमा महिला कडा सीमित अधिकार छ। यो इस्लामी कानून आधारमा ठूलो धार्मिक नेताहरूको देश को प्रभाव र विशेष गरी व्यवस्था कारण हो।
साउदी अरबमा महिला को जीवन
नजिकको पुरुष नातेदार - राज्यको प्रत्येक वयस्क निवासी एक संरक्षकको हुनुपर्छ। साउदी अरबमा महिला अभिभाबकहरुको सहमति यात्रा गर्न मौका को deprived छन्, बिना इजाजतपत्र एक कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न, काम गर्न, व्यापार गर्न प्राप्त गर्न। शिक्षा अनुमति गरिनेछ मात्र महिला वातावरणमा, पुरुष शिक्षकहरू pupils मात्र घरेलू टेलिभिजन संग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। पनि अवस्थामा जहाँ व्यवस्था संरक्षकको सहमति आवश्यक छैन मा, शक्ति संरचना अनुमति उहाँलाई आउँछन्। उनको पति वा महिला लागि संरक्षकको को अनुमति बिना हितमा राज्य चिकित्सा उपचार प्राप्त छैन। त्यहाँ ठूलो विविधता छ, पुरुष प्रभुत्व perpetuate कुनै व्यवस्था महिलाहरु विरुद्ध हिंसा बन्देज, तर कानून छन्। यसरी, पुरुषहरु, धेरै पत्नीहरू छ कानुनी justifications विस्तार बिना unilaterally तिनीहरूलाई छोडपत्र, अधिकार छ। कानुनी छोडपत्र प्राप्त गर्न fairer सेक्स को लागि धेरै गाह्रो छ। महिला हकदार एक अंश उत्तराधिकार को दाबी गर्न सक्छन् पुरुष हकदार भन्दा दुई पटक सानो छ। देश को बासिन्दा कार चलाउनु गर्न अनुमति छैन। आकार लामो कालो पोशाक लुकाउँछ - तिनीहरूले आफ्नो अनुहार र कपाल कवर र abaya लगाउन बाध्य छन्।
मानिसहरू conservatives महिलाहरु साउदी अरब पहुँच छ भनेर अधिकार विस्तार गर्न सहमत छन्
2011 मा, Korol Abdalla महिला सहभागी अनुमति एक उर्दी जारी नगरपालिका चुनाव। यसबाहेक, देश को एक निवासी पहिले विशेष पुरुष आयोजित शाही सल्लाहकार परिषद मा बस्न सही, छ। साउदी अरब (फोटो) को दुई महिला उपस्थित थियो ओलम्पिक खेल को इतिहास मा पहिलो पटक गर्मी 2012 मा: अकाट्य प्रगति खेल बनेको छ। अप्रिल 2013 मा, विश्व मानिसहरूको उदारता नयाँ राज्यको समाचार फैलिएको थियो। तिनीहरूले महिलाहरु साइकिल र motorbikes सवारी गरौं, तर प्रतिबन्ध को एक नम्बर शुरू। पहिले, saudovki उनको Kin संग मिलेर, पति को साथी वा अर्को पुरुष व्यक्ति बिना सवारी सक्दैन। दोस्रो, तपाईं सम्म मानिसहरूको संग्रह को स्थानबाट टाढा छन् जो पार्क र अन्य नामित क्षेत्रहरु, एक बाइक मार्ग मा चल्न सक्छ। अन्तमा, अन्तिम सीमा: साउदी अरबमा एक साइकल वा मोटरसाइकल महिलाहरु मा एक सवारी केवल टाउको देखि खुट्टाको औंलासम्म राष्ट्रिय पोशाक मा पोको गर्न सकिन्छ - abaya। यी नियम, निम्न धार्मिक प्रहरी, को उत्सव इस्लाम को canons उल्लङ्घन गर्न कुनै पनि प्रयासहरू रोक्न भनेर थप्न रहनेछ।
केही सुधार भए तापनि एक निश्चित हदसम्म गर्न सुधार को कानूनी स्थिति साउदी महिला, विवेक अवस्थित जारी। इस्लामी भन्सार र परम्परा को स्थिरता साउदी अरब बस्ने महिला को स्थिति मा एक तीब्र प्रगतिशील परिवर्तन को लागि, त्यहाँ सानो सान्दर्भिक वर्तमान कानुनी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था को क्षेत्र मा उचित सेक्स को स्थिति राख्नुभएको मान्यता छ आशा गर्न सक्दैन।
वाक्यांश के गर्छ "संग - कदर छैन, र हराएको - हामी रुन?"
जब तिनीहरू चर्च canons अनुसार, अन्त्येष्टि पछि गम्भीर गर्न माला हटाइएको? जब अन्त्येष्टि गर्न स्मारक ठाडो?
यो गुंडा को हुनुहुन्छ? subculture को सार
Erzya संग्रहालय (सारान्स्क) - संग्रह प्रदर्शन, प्रदर्शनियों, पर्यटन
कसरी कार मा एक subwoofer जडान गर्न कहाँ यसलाई राखिएको छ
अन्डा को मद्दतले तत्काल वजन: मेनु, समीक्षा
आम इलेक्ट्रन - महंगा र साना वाल्व
पार्किंसंस रोग: कारण र रोग को उपचार
कसरी आफ्नै हातले एक अर्बोर निर्माण गर्न
कसले मुला को लाभदायक गुण थाहा हुनुपर्छ
Ribes alpinum: विविधता को विवरण
Huashen बाट जैव-फोटोहरूसँग मेडिकल कपडा
रोस्ट बीफ - यो के हो? रोस्ट बीफ कसरी खाना पकाउनु